Football Khabar » सिटीमाथि च्याम्पियन्स लिगमा प्रतिबन्ध लागेपछि ग्वार्डिओलाको नयाँ गन्तव्य युभेन्टस !
सिटीमाथि च्याम्पियन्स लिगमा प्रतिबन्ध लागेपछि ग्वार्डिओलाको नयाँ गन्तव्य युभेन्टस !
इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर सिटीमाथि युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा दुई सिजनको प्रतिबन्ध लागेपछि प्रशिक्षक पेप ग्वार्डिओलाले यो सिजनपछि क्लब छाड्ने करिब–करिब पक्का छ । क्लबले युरोपकै सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता नै खेल्न नपाउने अवस्थामा सर्वाधिक सफल कहलिएका ग्वार्डिओला सिटीमै रहिरहने सम्भावना ज्यादै न्यून छ ।
यदि ग्वार्डिओलाले सिटी छाडे उनीलाई भित्र्याउन सक्ने क्लबहरूको दौडमा इटालियन युभेन्टस सबैभन्दा अगाडि छ । हालका प्रशिक्षक माउरिसियो सार्रीको नेतृत्वमा युभेन्टसले पछिल्लो समय कमजोर प्रदर्शन गरिरहँदा क्लबले उचित समयमा नयाँ प्रशिक्षक नियुक्त गर्ने अवस्था बन्दै गएको छ ।
र, त्यसका लागि युभेन्टसले स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाका पूर्वप्रशिक्षक ग्वार्डिओललाई पहिलो टार्गेटमा राखेको चर्चा छ । इटालियन मिडियाका अनुसार यदि सार्रीको नेतृत्वमा युभेन्टस उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै अघि बढ्न नसके जुनसुकै बेला पनि उनलाई बर्खास्त गरेर ग्वार्डिओलालाई नियुक्त गर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ । खबरअनुसार युभेन्टसका अधिकारीले ग्वार्डिओलासँग सम्पर्क बढाइसकेका छन् ।
यता, यदि ग्वार्डिओला युभेन्टस जान नसके उनको दोस्रो गन्तव्य पूर्वक्लब बार्सिलोना हो । तर, बार्सिलोनाले हालै मात्र नयाँ प्रशिक्षक क्विके सेटिनलाई नियुक्त गरेकाले ग्वार्डिओला तत्कालै स्पेन फर्किने सम्भावना भने कम छ । पूर्वक्लबमा पुनः प्रशिक बनेर पुग्ने ग्वार्डिओला र क्लब बार्सिलोना स्वयंले पनि पर्खिनुपर्ने हुन्छ ।
प्रकाशित मिति ३ फाल्गुन २०७६, शनिबार १९:१६